မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန် နဲ့ နယ်သာလန် နိုင်ငံသားရိုင်နာဒီရစ်ဒါနဲ့ နောက်ထပ်မကျေပွဲ ယှဥ်ပြိုင်ထိုးသတ်ဦးမလား - Myanmarload
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန် နဲ့ နယ်သာလန် နိုင်ငံသားရိုင်နာဒီရစ်ဒါနဲ့ နောက်ထပ်မကျေပွဲ ယှဥ်ပြိုင်ထိုးသတ်ဦးမလား
လွန်ခဲ့သော ၇ လ က 14:05 October 31, 2020
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲ့နက် အားပေးချစ်ခင်ရတဲ့ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်ကတော့ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံပွဲအဖြစ် ယှဥ်ပြိုင်ထိုးသတ်တဲ့ပွဲဲမှာ စိန်ခေါ်သူ နယ်သာလန်နိုင်ငံသား ရိုင်နာဒီရစ်ဒါကို ပထမအချီမှာ နောက်ကျောချုပ်ကွက်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန် ပွဲကိုတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေက အားပေးကြည့်ရှု့ခဲ့ပြီး ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ချုပ်ကွက်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ကို စိတ်ဓာတ်မကျသွားအောင် အားပေးစကားတွေလည်း ပြောကြသလို ဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ အောင်လအန်ဆန် က ရှုံးနိမ့်မှုကြောင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေကို ယခုလို သူ့ရဲ့ Facebook Page လေးမှာ ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။
"ကျွန်တော်နေကောင်းကျန်းမာပါတယ်၊ကျွန်တော့်မိသားစုလည်းနေကောင်းကျန်းမာကြပါတယ်၊ထို့အတူကျွန်တော့်အသင်းကလည်းကျွန်တော့်ကိုနောက်ကွယ်ကနေအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်ပါတယ်!ကျွန်တော်အသန်မာဆုံး၊အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်ပြင်ဆင် ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ထိုးသတ်ပြီးတော့၊မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံ ခါးပတ်ကိုပြန်လည်အရယူမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။ဒီတော့ငိုကြွေးမနေပါနဲ့တော့
I’m healthy, my family is healthy and I’ve gotagreat team behind me. God is good! We will be back stronger and I will get that middleweight belt back! Mark my words. don’t need to cry at all." ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း အောင်လအန်ဆန် နဲ့ ရိုင်နာဒီရစ်ဒါ တို့မကျေးပွဲနောက်ထပ် ယှဥ်ပြိုင်ထိုးသတ်ဖိုးအတွက် ကိုအောင်လကို အားပေးစကားလေးပြောပေးခဲ့ပါဦးနော်...။
Page generated in 0.1705 seconds with5database query and6memcached query.